Injinịa na R&D - Shanghai Chigong Industrial Co., Ltd.
Anyị na -arụ ọrụ na igwe ihe igwe nchara China maka imepụta nchara nwere ezigbo ihe alloy iji nweta ezigbo ihe eji arụ ọrụ maka agbụ ígwè njikọ okirikiri ejiri na -egwupụta akụ na mbuli elu. Dị ka ụlọ ọrụ agbụ ígwè maka afọ 30, nghọta anyị na nzaghachi nke arụmọrụ njikọ njikọ okirikiri na ụlọ ọrụ dị iche iche nyere aka na mmepe nke igwe ihe igwe nwere ụda igwe.
-Mkparịta ụka & akpaaka nke njikọ njikọ njikọ gburugburu
Emere nke a na 2018, mana ya na ndị injinia R&D ruo afọ ole na ole. Nnukwu agamnihu a rụpụtarala:
Ogo nkwalite njikọ njikọ okirikiri dị mma na nkwụsi ike ruo n'ọkwa dị elu;
Mmepụta arụmọrụ (n'ihe banyere ịdị mma) emeziri nke ọma;
Nkwalite nchekwa maka ndị ọrụ;
Ike siri ike nke ụlọ ọrụ siri ike ma gbaa ume maka ihe ọhụrụ.
Achọpụtaghị njikọ ruo mgbe ọgwụgwọ ikpo ọkụ.
A na -enye ụdọ SCIC maka ụfọdụ ngwa siri ike, gụnyere agbụ ọla kọpa nke ihe na -emebi emebi na iyi yana ibuli ibu nke oke nchekwa; Teknụzụ ọgwụgwọ okpomọkụ ga-ekpebi njirimara njikọ njikọta site na isi ruo na elu, ka ọ dabara maka ọnọdụ ọrụ siri ike. Ike, ike ndọda, ịgbatị, ntụpọ, ike ọgwụgwụ, wdg, bụ ihe niile dị oke mkpa nke injinịa na-eji okpomoku zuru oke nwere ike inye aka wụnye njikọ njikọ ọ bụla.
-FEA/FEM na ule ike ọgwụgwụ
Anyị na -anabata FEA/FEM iji bulie nhazi njikọ njikọ eriri, na -ebute arụmọrụ ka mma na ogologo ndụ.
Ọ na -enyekwa aka n'ịmepụta njikọ ụdị na ụdị njikọ ụdị/ụdị ọhụrụ, ma ọ bụ nke onye ahịa rịọrọ ma ọ bụ mepụta ụzọ ọhụrụ maka ụlọ ọrụ.
Ihe mkpuchi agbụ okirikiri dịgasị iche iche dabere na ebumnuche mkpuchi, nke nwere ike ịbụ maka nchekwa ogologo, ma ọ bụ maka mgbochi corrosion, ma ọ bụ maka iyi mgbochi, ma ọ bụ maka njirimara agba, wdg.
Mkpuchi njikọ njikọ SCIC na -ekpuchi eserese epoxy, galvanizing electro, galvanizing mikpuru n'ime mmiri, sherardizing, wdg.
Anyị dị njikere ịrụ ọrụ maka ndị ahịa ihe mkpuchi mkpuchi agbụ.